Ndibona uMlilo nguEd Sheeran - Izinto Zobugcisa
Ndibona uMlilo nguEd Sheeran
Le ngoma idlala ngexesha lokugqibela iikhredithi ze-movie yeHobbit Ukukhululwa kwerhamncwa . UMlawuli uPeter Jackson kunye nomfazi wakhe ongumvelisi uFran Walsh bakhethe uku-Sheeran ukuba babhale kwaye benze umculo belandela ingcebiso yentombi yabo. 'Ndibona uMlilo' yindlela asabela ngayo u-Ed kule filimu, utshilo uJackson. 'Igqibelele.'
USheeran ubukele umboniso bhanyabhanya, wabhala ingoma, kwaye urekhode uninzi lwayo kwangolo suku lunye. 'Ndavunyelwa ukuba ndenze inkululeko endandicinga ukuba iyayifanela le vidiyo, nto leyo inqabileyo, kwaye uPeter, uFran noPhilippa [Boyens, umbhali wesikrini] babehlala bekhona ukuba banike amanqaku kunye nezikhombisi, utshilo. 'Iqela liphela eNew Zealand beliphume kweli hlabathi.'
Ngaphandle kokuba engazange wayidlala ivayolin ebomini bakhe bonke, uSheeran ukhetha ukuyenza ngokwakhe ngokudlula ngaphezulu. U-tweeted: 'Ndifumene ithuba lokuvelisa nokudlala zonke izixhobo kuyo ngaphandle kwecello. Kulawulwe ukuba kufundwe ivayolin kusuku olunye, ndiyathemba ukuba nonke niyomba. '
IHobbit yayiyincwadi yokuqala uSheeran awayifunda esemncinci. 'Ndisazama ukuba ndiyenzile ingoma yefilimu kaPeter Jackson ebekwe kuMbindi womhlaba!, Utshilo.
USheeran uzame ukungena kwingqondo efanelekileyo xa ebhala ingoma. Andikaze ndibengumntu omncinci, kodwa ndibhale ingoma ngombono wokuba yinto encinci, uxelele iMTV News.
USheeran wongeze ukuba wayeyalelwe ngumlawuli uPeter Jackson ukuba agxile kwicandelo elithile lemovie. 'UPeter uthe,' Gxila kwimizuzu elishumi yokugqibela. Yile nto kufuneka ingoma ibonakalise. '' Uthe, '' Bhala ingoma ethatha abaphulaphuli ngesandla kwaye ibakhokele kuMhlaba oPhakathi babuyele kwinyani. Ke, ndizamile ukuyenza loo nto. '
USheeran ucacisele uJam! Umculo kutheni weza ne-lilting, umculo we-Celtic onefuthe kwingoma. Umbono wokuqala endandinayo wale ngoma yayiyinto entle, utshilo. Kodwa kwakubonakala ngathi, xa ndibukele umboniso bhanyabhanya, intliziyo yam ibipompa kakhulu. Kunzulu kakhulu, ndaziva ndifuna indlela yokukhulula abantu baphume kwiithiyetha. '
Ingoma yayiyinto eyabethwa kwilizwe liphela, yabeka itshathi engatshatanga kumazwe aliqela kubandakanya iNew Zealand, iNorway, iPhilippines kunye neSweden.
Isigqubuthelo sepop opera trio uSol3 Mio wakhutshwa njengomhobe waseNew Zealand kwiNdebe yeHlabathi yeRugby ka-2015.
Lyrics for Ndenze Bawo Nguwe by The Shirelles
Iingoma zokutsala umoya nguDonovan
Iingoma zomzimba wakho yiWonderland nguJohn Mayer
Iingoma zokuFunda ukuBhabha nguTom Petty kunye nabaphula iintliziyo
Iintsingiselo ezingama-99- Ngaba uyalibona inani leengelosi ezingama-99?
Iingoma ze-Cha Cha Slide ngu-DJ Casper
Iingoma zomnye wethu ngu-ABBA
Iingoma zokuthi Ungalili ngeGuns N 'Roses
Iingoma zokuzukiswa kothando nguPeter Cetera
Yoncé / Isahlulo sikaBeyoncé
Iingoma zeThenda ngeBlur
IViva La Vida nguColdplay
michael jackson indoda esipilini lyrics
usenguye omnye weengoma zomculo
Ndifuna ukuba ubuye nomhla wokukhutshwa
sukuma ude ufumane amazwi awoneleyo
ndiyathwalwa ndingumazwi weirdo
Kutheni le nto sinokuba ngabahlobo be-youtube
U-aretha franklin uvuyo luphelile